Tsy nitovy hevitra tamin'izany anefa ny Governemanta Ostralianina, satria aminy dia mamporisika ny Ostralianina tsy hanao Vaksiny ny famelana an'i Novak Djokovic, izay fanta-daza, nefa milaza fa tsy hanao Vaksiny, ka nametraka ny fahefany ny ministeran'ny ati-tany, ka dia namerina azy amin'ny faritra fitazonana ireo vahiny tsy ara-dalàna.
Nametraka fitoriana indray ity tompon-daka manerantany amin'ny Tennis ity, nefa nolavin'ny fitsarana izay fangatahany fepetra manokana izay, ka dia ho voaroaka any Australie i Novak Djokovic.
Naneho ny alahelony moa ity Serbe ity, izay namafisin'ny filohan'i Serbie, fa manaiky kosa ny fanampahan-kevitra.
Ho sahirana ihany ity mpilalao ity amin'ny tohin'ny maha matihanina amin'ny Tennis azy, satria ireo firenen-dehibe dia saika mitaky ny fahavitana Vaksiny avokoa vao afaka mandray anjara amin'ny fifaninana avo lenta toy izao, anisan'izany Etats-Unis.
Izy rahateo efa mihalehibe 34 taona, izay nikendry ny andrombaka ny faha 21 tompon-daka amin'ny Grand Chelem.